Haweenka Sacuudiga Oo Loo Ogolaaday Inay Wadi Karaan Baabuurta – Balcad.com Teyteyleey
Haweenka Sacuudiga Oo Loo Ogolaaday Inay Wadi Karaan Baabuurta
Boqorka Sacuudiga boqor Salman ayaa soo saaray amar u ogolaanaya haweenka Sacuudiga in ay gawaarida kaxeeyaan markii ugu horeysay.
Arrintan ayaa waxa si wayn ugu farxay dadkii u ololaynayay muddada dheer in haweenka loo ogolaado in ay gawaarida kaxeeyaan.
Boqortooyada Sacuudiga ayaa ah dalka kali ah ee caalamka aan haweenka loo ogolayn in ay gawaarida kaxeeyaan.Ilaa waqti xaadirkan, ragga oo kali ah ayaa loo ogol yahay Laysinka darawalnimada islamarkana haweenka lagu arko iyaga oo gawaari kaxaynaya waxa ay halis ugu jiraan in la xiro ama la ganado, inkastoo si dhuumaaleysi ah ay u kaxeeyaan.
Ammaanta iyo soo dhawaynta loo jeediyay tillaabadan ayaa ka imaanaysa gudaha Sacuudiga iyo caalamka intiisa kale.
Madaxwaynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in ay tahay tillaabo wanaagsan oo loo qaaday hormarinta xuquuqda Dumarka.Sahar Nassif oo u ololayn jirtay in Dumar loo ogolaado in ay gawaarida kaxeeyaan ayaa BBC u sheegtay in ay si aad ah ay ugu faraxsan tahay go’aankan islamarkana markii ay maqashay ay damaashaad samaysay.
Haweenka Sacuudiga si dhuumaaleysi ah ayey u kaxeeyaan baabuurta
“Waxa aan hadda doonayaa in aan iibiso Gaarigii aan ku riyoon jiray,waxa uuna midibkiisa noqon doonaa madow iyo cagaar isku jira!”ayay si farxad leh u tiri NassifMaxaa hadaba xiga oo dhici doona?
Waxaa la dhisi doonaa guddi heer wasiiro ah oo tali ka baxiya arrintan muddo 30 maalmood gudahood ah.
Amarka boqorka ayaa la dhaqangalin doonaa 24 June 2018
Danjiraha Sacuudiga u fadhiya Mareykanka, Khaled bin Salman, ayaa xaqiijiyay in haweenka aysan ragga uga fasax qaadan doonin wadadi Gawaarida islamarkana ay Gawaarida ku wadi karaan meel kasta oo Sacuudiga ka tirsan.
Waddo sidee ah ayaa loo maray isbadalkan?
Kooxaha u dooda xuquuqda aadnaha ee Sacuudiga ayaa sanooyiin badan u ololeyn jiray in haweenka loo ogolaado in gaadiidka ay kaxeeyaan.
Haweenka kaxeeya gaadiidka ayaa xabsiga la dhigi jiray ,waxaana lagu eedeeyn jiray in ay sharciga jabiyeen.
The post Haweenka Sacuudiga Oo Loo Ogolaaday Inay Wadi Karaan Baabuurta appeared first on Ilwareed Online.
Taabit Oo Jawaab Ka Bixiyay Fal Laga Argagaxo Oo AMISOM Ku Kacday *Daawo*
AMISOM regrets the accident involving one of its vehicles in Mogadishu
Dhacdii Qaraxii Dhul Gariirka Mogadishu Maansadii ay tiriyeen gabsho soomaaliyeed
Maxamuud Axmed	 Oct 19, 2017
NRC PRESS RELEASE: Grim milestone – Somalia drought and conflict force…
Farmaajo oo isugu yeeray shir degdeg ah Labada Aqal
Falanqeyn: Dhul gariirkii isgoyska Zoobe waa jabkii alshabaab